Kubadaha hilibka ee ku jira suugada basasha- karinta guriga lagu sameeyo | Cunnooyinka jikada
Kubadaha hilibka ee maraqa basasha
Montse Morote | | Cunnooyinka Hilibka
Kubadaha hilibka ee maraqa ku jira saxan qof kasta oo guriga jooga uu jecel yahay oo aan la seegi karin. Kuwaan aan kuu keenayo waxay ku jiraan maraqa basasha, in kastoo ay caan ku yihiin yaanyada.
ka kubbadaha hilibka ee maraqa basashaAad ayey u fiican yihiin oo ma tabi kartid gabal rooti fiican.
Nooca cuntada: seken
Waqtiga karinta: 45 m
Wadarta waqtiga: 1 pm
1 k. hilib shiidan (lo'da iyo hilibka doofaarka oo isku jira)
Burcadka rootiga, 2 qaado
Khamri cad 150ml.
Saliid iyo cusbo
Waxaan hilibka ku ridnay baaquli, waxaan ku dari doonaa toonta la shiiday, dhir, ukunta, rootiga, milix iyo basbaas. Wax walba waanu isku qasan doonaa, dabool oo ku dhex dhig qaboojiyaha, dhawr saacadood ama maalin ilaa maalinta ku xigta, si ay u qaaddo dhadhanka.
Markaan u tagno diyaarintooda, waxaan ku shubi doonnaa bur baaquli, waxaan ku sameyn doonnaa kubado hilibka waxaanan dhex mari doonnaa burka.
Waxaan dhigeynaa digsi saliid fara badan leh, markay aad u kulushahay waanu bunari doonaa, muhiim maahan in wax badan la qabto, kaliya waxay ku bunnixayaan banaanka, kadib waxay ku dhameysan doonaan karinta maraqa.
Waan soo bixin doonnaa oo waxaan uga tagi doonnaa saxan ay ku jirto warqadda jikada, si ay saliida u qaadato.
Markay wada dhammaadaan, saliidda waannu miijin doonnaa si aan u shiilino, in yar oo saliidan ah ayaan digsi ku shubi doonnaa oo waan shiilaynaa basasha la shiiday.
Markuu bilaabo inuu midab qaato waxaan ku dari doonaa qaado qaado oo walaaq ah.
Kadib waxaan dhigeynaa khamriga cad, waxaan tagi doonaa daqiiqado.
Waxaan wada dhigeynaa kubbadaha hilibka oo waxaan ku daboolnaa biyo.
Ha u kariso ilaa 30 daqiiqo, haddii ay wax badan dhumuc yeelato ama ay dhammaato kaydka, waxaan ku dari doonnaa biyo badan, kala badh inta aan karinayno, waxaan ku dari doonnaa xoogaa milix ah iyo haddii aad jeceshahay cube.
Waqtigaan ka dib waxaan dhadhaminaa cusbada waana diyaar noqon doonaan.
Iyo in rootiga dunk !!!
Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay iyaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka Hilibka » Kubadaha hilibka ee maraqa basasha
Tuna leh suugo yaanyo ah
Broccoli, miro la qalajiyey iyo hilib doofaar walaaq shiil